တောရပျော် မလေးငြိမ်၏ အဆိုအမိန့် ခံယူချက်ကို သဘောကျတဲ့အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပါတယ်.. မိမိအကြိုက်ပေါ့.
Posted by yawcommunity at Friday, February 25, 20110comments
Posted by yawcommunity at Wednesday, February 23, 20110comments
(၆) နှုတ်ပြောတစ်ခြား အလုပ်တစ်ခြား ပြုမူပြောဆိုတတ်သူများ
(၇) အရှက်အကြောက် မရှိတဲ့သူများ
(၈) ကျေးဇူးကို မသိတတ်သူများ
(၉) မုန်းလွယ် ချစ်လွယ်သော စိတ်ရှိသူများ
(၁၀) အန္တရာယ်ပြုရအောင် ပေါင်းဖော်လာသူများ
(၁၁) စကားမတည်၊ ဒုစရိုက်အလုပ်တွေကို ပြုလုပ်ပြီး တွေ့ သမျှသတ္တ၀ါတွေကို
(၁၂) စကားသာပြေပြစ်ပြီး စိတ်မပါပဲ ဟန်ဆောင်ပေါင်းကာ အခွင့်အရေးရှာတတ်တဲ့ သူများ
(၁၃) မြင်မြင်သမျှကို လိုချင်မက်မောတတ်တဲ့အပြင် မိတ်ဆွေကိုပါ ဖျက်ဆီးသွားတတ်သူများ
(၁၄) နှုတ်ကသာချိုသာပြီး စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ သူများ။
(ကိုယ်ကျင့်မင်္ဂလာ - အရှင်ကုမာရ)
Posted by yawcommunity at Saturday, February 12, 20110comments
Posted by yawcommunity at Friday, February 04, 20110comments
Posted by yawcommunity at Sunday, January 30, 2011 1 comments
Posted by yawcommunity at Wednesday, January 26, 20110comments
Posted by yawcommunity at Saturday, January 22, 20110comments
ဘာတွေက မညီတာလဲ ဘယ်လိုညှိရမလဲ
ဟုတ်ပါတယ် ဒကမလေးရေ.. သဒ္ဓါတရားဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးသလို သဒ္ဓါလွန်လို့ကွန့်တာ သဒ္ဓါလွန်လို့ တဏှာဖြစ် တတ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။
သဒ္ဓါဖြစ်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ယုံကြည်မှု လို့ခေါ်တဲ့သဒ္ဓါတရား မရှိရင် ဒီလူဟာ ကောင်းတာလုပ်လုပ် မကောင်းတာဘဲ လုပ်လုပ် ဘာမှမထူးပါဘူးကွာ..ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်သွားပါမယ်။ ဒီလိုစိတ်ဝင်သွားရင် မကောင်းတာမှန်သမျှ မလုပ်ရဲတာ မရှိတော့ပါဘူး။ မကောင်းတာမှန်သမျှ လက်ရဲ ဇက်ရဲ လုပ်လာတဲ့ ဒီလူမှာ မကောင်းမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်၊မကောင်းမှုတွေဆက်တိုက်လုပ်ရင် အကုသိုလ်တွေ တပုံတပင်နဲ့ အပါယ်ငရဲကို တန်းသွားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သဒ္ဓါတရားဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
၁။ ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့သူတစ်ပါးကို လှူဒါန်းပါ၊ကူညီပါ(စိတ်မကြည် မလင်မဖြစ်ရပါဘူး)၊
၃။ယုံကြည်ချက်အားလျော်တဲ့ ဥပုသ်သီလ စောင့်ထိန်းပါ၊
၄။ဂုဏ်တော်ပွားပါ တရားထိုင်ပါ(အဘိ၊ဋ္ဌ၊၁၊၁၆၂)-ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ သဒ္ဓါတရားတွေ ပြန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်၊ တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
သဒ္ဓါလွန်ရင် ကွန့်-တဲ့၊ သဒ္ဓါလွန်လို့ တဏှာဖြစ်ခဲ့တာတွေ ဘုရားလက်ထက်မှာရော ယနေ့ခေတ်မှာပါ ရှိခဲ့ ရှိနေပါတယ်၊ သူ့နာမည်က သုပဗ္ဗာ.တဲ့၊ သံဃာတော်တွေကို သိပ်ကြည်ညိုပါတယ်၊ ကြည်ညိုလွန်း သဒ္ဓါဖြစ်လွန်းတော့..သူစဉ်းစားတာက..သံဃာတော်တွေကို ဒကာ ဒကာမတွေက လှူနေတဲ့ပစ္စည်းတွေ အများကြီးပဲ၊ မလှူတာ တစ်ခုပဲရှိတယ်၊ လူများတွေ မလှူတဲ့ အဲဒီအလှူကို လှူရင် အမြတ်ဆုံးဒါန ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ တွေးပြီး သံဃာတော်များကို မေထုန်အလှူ လှူတယ်၊ (ပါ။၁။နှာ၄၉) ၊ဘုရားရှင်က သံဃာတော်များအတွက် စည်းကမ်းချမှတ်ရသလို သုပဗ္ဗာရဲ့ သဒ္ဓါတရားကိုလဲ အကျိုးမရှိတဲ့ သဒ္ဓါတရားလို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။ ပုဂံခေတ်မှာ ပန်းဦးဆက်ရတဲ့ လုပ်ရပ်ကလဲ သဒ္ဓါလွန်တဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်ပါမယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟန်ချက်ညီတဲ့ သဒ္ဓါတရား ငြိမ်းချမ်းမှုရှိတဲ့သဒ္ဓါ၊ ပြတ်သားတဲ့ သဒ္ဓါတရားဖြစ်ဖို့ ပညာနဲ့ ညှိရပါမယ်။ သဒ္ဓါတရား အားကောင်းပြီး ပညာမပါရင်လဲ တလွဲဖြစ်တတ်တယ်။ နည်းလမ်းမကျဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ခုတ်ရာတခြား ရှရာတခြား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ပညာအားကောင်းပြီး သဒ္ဓါတရားမပါရင်လဲ ဘာကိုမှ မယုံကြည်တော့ပဲ လူချော်ကြီး ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ လူသေလူဖြစ်ဝါဒ ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ပညာပဲဦးစားပေးပြီး ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားမရှိတော့.. ဘုရားဟောတဲ့ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ် ဗြဟ္မာပြည် ၂၀ ဆိုတာ မရှိဘူး..လူသေရင် လူပဲပြန်ဖြစ်မယ်..တိရိစ္ဆာန် နတ် ဗြဟ္မာ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံဆိုတာ မရှိနိုင်ဘူးတွေ ဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့် မကြည်ပြာရေ.. သဒ္ဓါတရားကို ပညာနဲ့ ညှိပါ၊ ပညာကိုလဲ သဒ္ဓါနဲ့တိုင်းတာပါ သဒ္ဓါ ပညာမျှတဲ့ ဘ၀ဟာ ငြိမ်းချမ်းသာယာပါလိမ့်မယ်လို့ ဖြေလိုက်ပါရစေ။
ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားကလဲ အဆင့်လေးဆင့်ရှိပါသေးတယ်. ဘုရားလောင်းတွေရဲ့ ယုံချက် အာဂမသဒ္ဓါ၊တရားထူးရပြီးတဲ့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ အဓိဂမသဒ္ဓါ၊ ရတနာသုံးပါးအပေါ်မှာ တကယ့်ကို သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ ဩကပ္ပနသဒ္ဓါနဲ့ ရတနာသုံးပါးအပေါ်မှာ အစဉ်အလာယုံကြည်တဲ့ ပသာဒသဒ္ဓါဆိုပြီး လေးမျိုးရှိသလို ပညာမှာလဲ သူ့အဆင့်နဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာကိုပါ ပူးတွဲမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။
သဒ္ဓါ ပညာ ဟန်ချက်ညီညီဖြင့် အတ္တဟိတ ပရဟိတ.ကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ။
Posted by yawcommunity at Friday, January 21, 2011 1 comments
ဗုဒ္ဓအလိုကျ "ပြဿနာ'' ဖြေရှင်းနည်း ဥပဒေသ
ဦးမနက်ဖြန်ရေးသားပေးပို့သည့် အီးမေးလ်ကို ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
ပြဿနာဟူသည် အကျိုးစကားလုံးဖြစ်သည်။ ပြဿနာလောက်ကိုသာ အပေါ်ယံကြည့်၍ ရှုတ်ချ အပုတ်ချခြင်းသည် အသိဥာဏ်နည်းသူများ၏ လုပ်ရပ်ဖြစ်သကဲ့သို့ တစ်ပါးသူ လွန်ကျူးမိသော အပြစ်ကို အများတကာသိအောင် ကြိုးစားခြင်းသည် စိတ်ပုတ် စိတ်ယုတ်ရှိသူများ၏ လက္ခဏာပေတည်း။ လောဘ ဒေါသ မောဟ ရှိသူမှန်သမျှသည် ပြဿနာကို လုပ်လေ့ရှိကြသည်။ ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင် ဟူသည် ပုထုဖဉ်လူသားတွေမှာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ လောဘကိုမထိန်းနိုင်ခြင်း ဒေါသကို မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မောဟကို မပယ်သတ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ် လွန်ပြီးခေတ်တွေမှာ ပြာဿနာပေါင်းစုံ အရှုပ်ပေါင်းစုံ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
နောင်လာမည့်ခေတ်တွေမှာလဲ ဖြစ်လာဦးမည်တည်း။ ပုထုဇဉ်လူသားမှန်သမျှသည် အပြစ်ကို လုပ်နေဦးမည်တည်း။ ထို့ကြောင့် ပြဿနာ၏ အကြောင်းတရားသည် လောဘ ဒေါသ မောဟ တို့ပေတည်းဟု သတိနှင့် သိရှိထားရပေမည်။ ပြဿနာဟူသည် လောဘ ဒေါသ မောဟတို့ဖြင့် လွန်ကျူးလာသော အပြစ်ပေတည်း။ ထိုကို ပြဿနာဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
တစုံတယောက် ပြဿနာလွန်ကျူးမိခဲ့လျှင် လွန်ကျူးသူ တစုံတယောက်သည် မိမိလွန်ကျူးမိသော အပြစ်ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသင့်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ထိုသူ၏ လွန်ကျူးမှုကို ကူညီဖြေရှင်းပေးသင့်သည်။ အော် လောဘကို မထိန်းနိုင်လို့ ဒေါသကို မတားနိုင်လို့ မောဟတရား အားကြီးလို့ ဒီလိုအပြစ်တွေဖြစ်တာပါလားလို့ ကိုယ်တိုင်းလည်း သင်္ခန်းစာ ယူသင့်သည်။
အပြစ်သည် လူမြင်သာသည်။ အပြစ်၏ အကြောင်းတရားသည် အမြင်ရခက်သည်။ ထို့ကြောင့် လောကတွင် အပြစ်တွေ့လာတိုင်း အပြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း၏ အကြောင်းတရားကို အခြေမြစ်သိရအောင် လေ့လာဖို့ လိုလာသည်။ အပြစ်ကို ဖုံးကွယ်ကာ ဖြေရှင်းသင့်သည်။ လော်စပီကာနှင့် အော်ကာ အများသူငှာ အသိပညာရရှိစေဖို့ ဝေငှရမည့် ကြော်ငြာ ပစ္စည်းမဟုတ်ပေ။
ယခုခေတ်မှာတော့ ဘလော့ပေါ် အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ် ဖြန့်ဝေရမည့် သတင်းလည်းမဟုတ်သလို အများသူငှာ သိသင့်သည် အင်ဖော်မေးရှင်းလည်း မဟုတ်ပေ။ မည်ကဲ့သိုအပြစ်ပေါ်လာလျှင် မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းသင့်သည်ဟုသာ ဖြေရှင်းနည်းကိုတော့ဖြင့် အင်ဖော်မေးရှင်းအဖြစ် ဝေငှမည်ဆိုလျှင် ဝေငှနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ မည်သူက မတရားလုပ်သဖြင့် ထိုမည်သူသည် လူယုတ်မာကြီးဟု အများသူငှာသို့ ဖြန်ဝေလျှင်တော့ ထိုဖြန့်ဝေသူကိုယ်တိုင်ပင် လူယုတ်မာကြီးဖြစ်လာပေတော့သည်။
ယနေ့ခေတ် အများစုသည် မိမိထံသို့ရောက်လာသော အင်ဖော်မေးရှင်းများကိုဖတ်ကာ ရေးသားဖော်ပြသည့် အကြောင်းအရာလောက်ကိုသာ အဟုတ်ကြီးထင်ကာ သံယောင်လိုက်၍ မတရားဘူး မလုပ်သင့်ဘူး ဒီလိုကြီးလုပ်တာ လူယုတ်မာပဲ စသည်ဖြင့် ဝေဘန်ကြသည် အတင်းတုတ်ကြသည်။ အပုတ်ချကြသည်။ အင်ဖော်မေးရှင်းရေးသူ သို့မဟုတ် ဖော်ပြသူ၏ အတွင်းစိတ်သည် ဤအကြောင်းအရာကို မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက် မည်သို့မည်ပုံရေးသည်ကို လေ့လာမဆန်းစစ်ကြပေ။
အင်ဖော်မာ (စာရေးသူ)သည် ပြဿနာတစုံတခုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အကျိုးဆိုးကို တပါးသူတုိ့ ဆင်ခြင်စေဖို့ အသိပညာရစေဖို့ ဝေငှလိုလျှင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာ၏ ဆိုလိုရင်း အကြောင်းတရား ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးကျိုးများကို ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကျကျ ရေးသားသင့်သည်။ အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ကာယကံရှင်တို့၏ အမည်များကို သုံးစွဲခွင့်မရှိပေ။ သုံးစွဲမည်ဆိုခဲ့လျှင် ခွင့်တောင်းရပေမည်။ သို့တည်းမဟုတ်ပဲ ခွင့်ပြုချက် မရှိပဲ အင်ဖော်မေးရှင်းအဖြစ်ရေးခဲ့လျှင် အင်ဖော်မာသမားသည် အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ကာယကံရှင်တို့အပေါ် မကျေနပ် အမုန်းပွားသော စိတ်ဖြင့် ရေးသားခြင်းသာ ဖြစ်ချေ၏။ ထို့ကြောင့် အင်ဖော်မာသမား သည်လည်း ဒေါသကိုမထိန်းနိုင်၍ ကိုယ်တိုင်ပင် သူတပါးကို အပုတ်ချခြင်း ရှုတ်ချခြင်း ဗျာပါဒ အပြစ် အကုသိုလ် လွန်ကျူးနေတော့၏။
ဆုတ်ကပ်ခေတ်ဖြစ်သော ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် မကြာ မကြာ ပြဿနာများ ပေါ်လာကြပေလိမ့်မည်။ ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကျကျ မိမိတို့ ရှု့မြင်သုံးသပ်ကာ ဒါကြောင့် ပြဿနာဖြစ်တာပဲ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ဒို့တွေ ရှောင်ကြဉ်ကြစို့ဟဲ့ဟု သင်္ခန်းစာယူရမည်။ မိမိဝန်းကျင်မှာ ပြာဿနာဖြစ်လာလျှင် ၀ိုင်းဝန်း၍ အသိပညာဖြင့် သိုသိုသိပ်သိပ် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြေရှင်းသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြာဿနာဖြေရှင်းနည်းများကို
မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောကြား နည်းပေးသည့်အတိုင်း အများသူငှာ သိရှိစေဖို့ ဝေငှလိုက်ပါသည်။
အဓိကရဏ -ပြဿနာ (၄)ခုရှိသည်။
(၁) ၀ိဝါဒါဓိကရဏ- ငြင်းခုံခြင်းပြဿနာ
(၂) အနုဝါဒါဓိကရဏ- စွပ်စွဲခံရခြင်းပြဿနာ
(၃) အာပတ္တာဓိကရဏ- အပြစ်လွန်ကျူးခြင်းပြဿနာ
(၄) ကိစ္စာဓိကရဏ- လူမှုရေးဖောက်ဖျက်ခြင်းပြဿနာ
သမထ (ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း) (၇)-ခု
(၁) သမ္မုခါဝိနယ- စွပ်စွဲသူ အစွပ်စွဲခံရသူဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ တရားနည်းလမ်းကျကျဟူသော ဓမ္မ၊ ရေးစွဲထားသည့် ဥပဒေစည်းမျဉ်းဟူသော ၀ိနယ၊ သမာသမတ်ကျသည် အဖွဲ့အစည်း တရားရုံးတို့၏ မျက်မှောက်တွင် စေ့စပ်ညှိုနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်း၊
(၂) ယေဘုယျသိကာဝိနယ- သမာသမတ်ကျသော အများသူငှာ (တရားရုံး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း) အဆုံးအဖြတ်ဖြင့် စေ့စပ်ညှိုနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်း၊
(၃) သတိဝိနယ- သတိပေးတားမြစ် အာမခံခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း၊
(၄) အမူဠ၀ိနယ- ပယ်လှပ်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း။ (စိတ်ဖောက်ပြန်သူများအတွက်)
(၅) ပဋိညာတကရဏ၀ိနယ- အပြစ်လွန်ကျူးကြောင်း ၀န်ခံစေခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း၊
(၆) တဿပါပိယသိကာဝိနယ- လွန်ကျူးပါလျက် မလွန်ကျူးဟု အတင်းငြင်းချတ်ထုတ်သူအား သက်သေအထောက်အထားအရလွန်ကျူးနေသူသို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဘွယ်ရှိသူ ဟုသာ အသိမှတ်ပြု၍ စေ့စပ်ညှိုနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်း
(၇) တိဏ၀တ္ထာရက ၀ိနယ- မစင်အညစ်ကြေးတို့သည် အနံ့ဆိုးဝါးလှသဖြင့် အနံ့ဆိုးတို့ဖြင့် အများသူငှာ မနှိပ်စက်စေရန် မြတ်သစ်ရွတ်တို့ဖြင့် ဖုံးဖိထားသကဲ့သို့ (ယခုခေတ်- ကျင်းတူး တွင်းတူ ဖုံးအုပ်ထားသကဲ့သို့) ပြဿနာသည် မငြိမ်းအေးပဲ ကြီးထွား မလာစေရန်နှင့် ညီညွတ်နေမှုတို့ ကွဲပြားပျက်စည်းမှုများ မဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စေရန် စေ့စပ်ညှိုနှိုင်းခြင်းမပြုပဲ တဦးနှင့်တဦး တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ အပြစ်မေ့ပျောက် ခွင့်လွှတ်နားလည်မှုဖြင့် ငြိမ်အေးစေခြင်း- တို့ဖြစ်သည်။
ပြဿနာနှင့် ဖြေရှင်းနည်း တွဲအသုံးပြုပုံ
၀ိဝါဒါအဓိရုဏ်ကို- (၁) သမ္မုခါဝိနယ- စွပ်စွဲသူ အစွပ်စွဲခံရသူဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ တရားနည်းလမ်းကျကျဟူသောဓမ္မ၊
ရေးစွဲထားသည့် ဥပဒေစည်းမျဉ်းဟူသော ၀ိနယ၊ သမာသမတ်ကျသည် အဖွဲ့အစည်း တရားရုံးတို့၏
(၂) ယေဘုယျသိကာဝိနယ- သမာသမတ်ကျသော အများသူငှာ (တရားရုံး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း) အဆုံးအဖြတ်ဖြင့် စေ့စပ်ညှိုနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်း နည်းနှစ်ခုဖြင့် ဖြေရှင်းပါ။
အနုဝါဒါဓိကရုဏ်ကို- (၁) သမ္မုခါဝိနယ- စွပ်စွဲသူ အစွပ်စွဲခံရသူဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ တရားနည်းလမ်းကျကျဟူသောဓမ္မ၊
ရေးစွဲထားသည့် ဥပဒေစည်းမျဉ်းဟူသော ၀ိနယ၊ သမာသမတ်ကျသည် အဖွဲ့အစည်း တ၇ားရုံးတို့၏
မျက်မှောက်တွင် စေ့စပ်ညှိုနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်း၊
(၄) အမူဠ၀ိနယ- ပယ်လှပ်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း
(၆) တဿပါပိယသိကာဝိနယ- လွန်ကျူးပါလျက် မလွန်ကျူးဟု အတင်းငြင်းချတ်ထုတ်သူအား သက်သေအထောက်အထားအရ
လွန်ကျူးနေသူသို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဘွယ်ရှိသူ ဟုသာ အသိမှတ်ပြု၍ စေ့စပ်ညှိုနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်းဟူသော နည်းလေးနည်းတို့ဖြင့် ဖြေရှင်းပါ။
အာပတ္တာဓိကရဏ-ကို- (၁) သမ္မုခါဝိနယ- စွပ်စွဲသူ အစွပ်စွဲခံရသဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ တရားနည်းလမ်းကျကျဟူသောဓမ္မ၊
(၇) တိဏ၀တ္ထာရက ၀ိနယ- မစင်အညစ်ကြေးတို့သည် အနံ့ဆိုးဝါးလှသဖြင့် အနံ့ဆိုးတို့ဖြင့် အများသူငှာ မနှိပ်စက်စေရန် မြတ်သစ်ရွတ်တို့ဖြင့် ဖုံးဖိထားသကဲ့သို့ (ယခုခေတ်- ကျင်းတူး တွင်းတူ ဖုံးအုပ်ထားသကဲ့သို့) ပြဿနာသည် မငြိမ်းအေးပဲ ကြီးထွား မလာစေရန်နှင့် ညီညွတ်နေမှုတို့ ကွဲပြားပျက်စည်းမှုများ မဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စေရန် စေ့စပ်ညှိုနှိုင်းခြင်းမပြုပဲ တဦးနှင့်တဦး
တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ အပြစ်မေ့ပျောက် ခွင့်လွတ်နာလည်မှုဖြင့် ငြိမ်အေးစေခြင်း။ နည်းသုံးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းပါ။
ကိစ္စာဓိကရဏ-ကို- (၁) သမ္မုခါဝိနယ- စွပ်စွဲသူ အစွပ်စွဲခံရသဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ တရားနည်းလမ်းကျကျဟူသောဓမ္မ၊
ရေးစွဲထားသည့် ဥပဒေစည်းမျဉ်းဟူသော ၀ိနယ၊ သမာသမတ်ကျသည် အဖွဲ့အစည်း တ၇ားရုံးတို့၏ မျက်မှောက်တွင်
စေ့စပ်ညှိုနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်း၊ ဖြင့်သာဖြေရှင်းပါ။
မြတ်ဗုဒ္ဓ ချပေးထားသည့် ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတွင် အများသူငှာ အသိရစေဖို့ ရှောင်ကြည်နိုင်စေဖို့ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် ဖော်ထုတ်ရမည်ဟု မပါချေ။ စာဖတ်သူတို့ နားလည်မည်ထင်ပါသည်။ မှုခင်းဂျာနယ်များကို ဖတ်ဖူးလျှင် သိပါမည်....ကာယကံရှင်တို့၏ အမည်များ ဓာတ်ပုံများ သုံးစွဲမည်ဆိုလျှင် ခွင့်တောင်းရပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်ယူရပါသည်။ သိုမဟုတ်ဘဲ နာမည်ဓာတ်ပုံမှာ
ကာယကံရှင် ခွင့်ပြုသည်မဟုတ်ပဲ သုံးစွဲလျှင် လူအခွင့်အရေး ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း လူ့ကျင့်ဝတ်အနေရသော်လည်းကောင်း သုံးစွဲသူ ဖော်ပြသူအား တရားစွဲလို့ရပါသည်။
ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် ရေးသားလာသော သတင်းနှင့် အကြောင်းအရာတို့သည် အမှန်စင်စစ် သတင်းမဟုတ်ပေ။ ဗဟုသုတ ဖြစ်ဖွယ်နှင့် အများသူငှာ ဖတ်သင့်သည့် အရာမဟုတ်ချေ။
တကယ်စင်စစ် စိတ်ဓာတ် အင်အားနည်း၍ အပုတ်ချ ရှုတ်ချခြင်းသာ ဖြစ်ချေသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ကို အမုန်းပွား အာဃာတထားခြင်းမျှသာ ဖြစ်ချေသည်။
ထို့ကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမကို လိုက်နာကြသည်ဟု ဆိုကြသည့် ညီ အကို၊ အမ ညီမငယ်များတို့ ...တကယ်ပင် ငါတို့သည် ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးမကို လိုက်နာသူများ ဖြစ်သည်လော မဖြစ်သည်လော၊ စာပေတွေဖတ် ဆရာတော်ပေါင်းများစွာ ဟောသမျှကို နာယူ ဖတ်နာရုံမျှ သက်သက်မျှဖြင့် ငါတို့ တော့ ဆရာကြီးဖြစ်ပြီဟု ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးကာ သူတပါးပြဿနာကို လေလိုင်းမှာ ဖွ၊ ငါသာ ဆရာကြီးဖြစ်သည်ဟု ကြွားဝါနေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသလော မဖြစ်နေသလောဟု ပြန်လည် ဆန်းစစ်သင့်ပေသည်။ သဒ္ဓါနည်း၍ ဆရာကြီးရောဂါပေါများနေသည့် ခေတ်ကြီးမှာ သတိထားစရာပင် ဖြစ်ပါ၏။ ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များနှင့် ချိန်ထိုးကြည့်လျှင် မိမိ.ဘာ..ဆိုတာကို နားလည်နိုင်မည်ဖြစ်ပါ၏။
န ပရေသံ ၀ိလောမာနိ၊ န ပရေသံ ကတာတံ၊
အတ္တနောဝ အဝေက္ခေယျ၊ ကတာနိ အကတာနိစ (ဓမ္မပဒ)
တပါးသူ အပြစ်၊ တပါးသူ လုပ်သည် မလုပ်သည်တို့ကို မကြည့်လေနှင့်၊
ကိုယ့်အပြစ် ကိုယ်လုပ်သည်မလုပ်သည်ကိုသာ ကြည့်လေ။
ပရ၀ဇ္ဇာ နုပဿိဿ၊ နိစ္စံ ဥဇ္ဈာနသညိနော
အာသ၀ါ တဿ ၀ဎုန္တိ၊ အာရာ သော အာသ၀က္ခယာ။ (ဓမ္မပဒ)
တပါးသူ အပြစ်ကို ဆီလိုအပေါက်ရှာ ကြည့်နေသူများမှာ မည်သို့ပင် တရားတွေနာ စာအုပ်တွေဖတ်နေစေကာမူ အကုသိုလ်တိုးပွား ကိလေသာထူ ကိလေသာ ချေးညှော်တွေ ဆူသဖြင့် နိဗ္ဗာန်နှင့် ဝေးလေတော့သတည်း။
Posted by yawcommunity at Tuesday, January 18, 20110comments
ဘာသာရေးစာပေတွေ ဖြန့်ဝေရေးသားနေတဲ့ ကိုဝိမုတ္တိက မိမိရေးတဲ့ လူလိမ်ကြီးများအကြောင်းကို ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အီးမေးလ်ပို့လာပါတယ်။ အများသိစေရန် ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြအပ်ပါတယ်။ ကိုဝိမုတ္တိရေ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူလိမ်ကြီးများ (http://www.yawcommunity.com/2011/01/blog-post.html) နှင့် ပတ်သက်၍
နောက်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ကတော့ အခုကိစ္စမှာ သင်တန်းကို ဦးစီးတဲ့သူက သံဃာတော်တစ်ပါးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပါ။ သံဃာဖြစ်တာလည်း ကိစ္စမရှိသေးဘူး။ အခုမှာ သူ့ ရဲ့  ပြောပုံဆိုပုံ၊ လုပ်ပုံတွေက သံဃာတော်တစ်ပါး ပြုသင့်ပြုအပ်၊ ပြောသင့်ပြောအပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ သာသနာတော်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတာပါ။ အမှန်က ဒီလိုသင်တန်းမျိုးကို မြတ်စွာဘုရားရဲ့  လောကီကြီးပွားကြောင်းတရားများနှင့်တွဲဖက်ပြီး သင်တန်းပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အတော် အားရကြည်နူးစရာကောင်းမယ့်အဖြစ်ပါ။ အခုတော့ ရွှေဘောင်ကွပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာ မစင်နှင့်လူးလိုက်သလိုဘဲခံစားရပါတယ်။
Burma Today ၌ ကိုမြတ်နိုင်ရေးသားသည့် မော်ဒန်ဘုန်းကြီးနှင့် စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း.ဆိုသည့် သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးကိုလည်း http://burmatoday.net မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ။
Posted by yawcommunity at Monday, January 17, 20110comments